BBC Burmese - အစီအစဉ်များ - မိုဘီဂျီနိုနဲ့ Sound of 2012
နောက်ဆုံး ရေးသားချိန် 31 ဇန်နဝါရီလ 2012 - 18:50 GMT
မိုဘီဂျီနိုနဲ့ Sound of 2012
မိုဘီ ဂျီနို ကဏ္ဍကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ . . .
မိုက်ကယ် ကီဝါနုကာ MTV Brand New for 2012 အတွက် သီဆိုစဉ်
ယူကေဂီတလောကနေ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဒီနှစ်အတွက် အလား အလားအရှိဆုံး လူသစ်တန်း အဆိုရှင်တစ်ဦး အကြောင်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဂီတလောကကို စတင်ဝင်ရောက်လာပြီး ပရိတ်သတ်သိပ်မသိသေးတဲ့ အဆိုတော် အသစ်တွေထဲက အခုနှစ်အတွင်း ထူးထူး ခြားခြား ရေပမ်းစားလာမယ့် သူတစ်ဦးကို ဘီဘီစီက ကြီးမှူးကာ Sound of 2012 ဆိုပြီး မဲပေး ရွေးချယ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုရသူကတော့ လန်ဒန်မြောက်ပိုင်းမှာ နေတဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် Michael Kiwanuka ဖြစ်ပါ တယ်။
သူ့ကို ယူကေမှာ ရှိတဲ့ ဂီတပညာရှင်တွေ၊ ဒီဂျေတွေ၊ ရေဒီယိုနဲ့တီဗီ ထုတ်လုပ် ရေးမှူးတွေ၊ ဂီတ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတွေ၊ ဂီတ ဘလော့ဂါတွေက ဒီနှစ်အတွက် အလား အလာ အကောင်းဆုံး အဆိုရှင် အဖြစ် စုပေါင်း မဲထည့်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ။
Sound of 2011: Jessie J (အပေါ်ပုံ)
Sound of 2010: Ellie Goulding
Sound of 2009: Little Boots
Sound of 2008: Adele
Sound of 2006: Corinne Bailey Rae
Sound of 2005: The Bravery
Sound of 2004: Keane
Sound of 2003: 50 Cent
မိုက်ကယ် ကီဝါနုကာဟာ ဒီဆုအတွက် ထိပ်ဆုံး ဇကာတင် စကားရင်းမှာပါတဲ့ အမေရိကန် က R 'N' B နဲ့ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် အဆိုတော်တွေ နဲ့ ဥရောပက ပေါ့ပ် အဆိုတော်တွေကို ကျော်တက်ပြီး ဒီဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာပါ။
သို့ မိုဘီ ဂျီနို . . .
မိုဘီ ဂျီနို အစီအစဉ်မှာ ကိုယ်သိချင်၊ ကြားချင်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေ ရှိရင် ဆက်သွယ်နိုင်သလို မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ အနေနဲ့ လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အနာဂတ် အိပ်မက်တွေ အကြောင်းကို ဒီအစီအစဉ်ကနေ ဝေမျှပြောပြကြဖို့ အမြဲ ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိ ပါတယ်။
ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် အီးမေးလ် burmese@bbc.co.uk ဆီကို ဆက်သွယ်နိုင်သလို စာတိုက်က ဆိုရင်တော့ စာတိုက်သတ္တာ အမှတ် ၉၉၇ ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ဆီကို ရေးသား ပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။
ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ ဖရောင်းတိုင်မီးနဲ့ ရှင်သန်ရဆဲ ဘဝတွေကို ဖော်ပြ။
တောင်ကိုးရီးယားက နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဒေသတွင်း ၁၂ နိုင်ငံက အခြားဒါရိုက်တာများနဲ့အတူ
Return to Burma ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခု
ဒီမှာပဲ အလုပ်ရှာရမလား၊ နိုင်ငံခြားထွက်ရမလား၊ လူငယ်တွေ စဉ်းစား
ဂစ်တာတီးမယ်၊ ဆေးပြောင်းရှုမယ်၊ ဘုရားမှာ ဆုတောင်းမယ်
မလေးရှားသွားမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို ကာရာအိုကေဆိုရင်း နှုတ်ဆက်
ရေသာများ၍ ငါးက မတွေ့
လူငယ် ဒါရိုက်တာ မီဒီ ဇက်
Return to Burma ဇာတ်ကား ကြော်ငြာ ဗီဒီယိုက မြင်ကွင်းတစ်ခု
ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းတို။ ဒါပေမယ့် ပြသဖို့ ရွေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာပြပွဲတွေက အများအပြား
The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စပြပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသမီး မစ်ရှဲယိုးပါဝင်တဲ့ The Lady ဇာတ်ကားကို စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် ကနေဒါမှာ စပြ
ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ ရီဘက်ကာ၊ အမျိုးသား သရုပ်ဆောင် ဒေးဗစ် သူးလစ်၊ မစ်ရှဲယိုး နဲ့ ဒါရိုက်တာ လု ဘက်ဆန်
မစ်ရှဲယိုးနဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေ ကနေဒါပွဲတော်အတွင်း တွေ့ဆုံ
မိုက်ကယ်လ် အဲရစ်နေရာက သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဒေးဗစ် သူးလစ်နဲ့ မစ်ရှဲယိုး
The Lady ဇာတ်ကားကို လာကြည့်ကြတဲ့ ကနေဒါရောက် မြန်မာများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံပေါ်မှာ မစ်ရှဲယိုးရဲ့ လက်မှတ်တွေ ထိုးခိုင်းခဲ့ကြ
မိုဘီ ဂျီနို အစီအစဉ်တွေ ပြန်နားထောင်မယ်ဆိုရင်
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်
မိုဘီဂျီနို နဲ့ နေဘုန်းလတ်
မိုဘီဂျီနိုနဲ့ V2 သီချင်းများ
မိုဘီဂျီနိုနဲ့ Oxford Fellow
မိုဘီဂျီနို နဲ့ ဒါရိုက်တာ
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ လူငယ်ညီလာခံ
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ Fulbrighter
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ ဂျပန်စကောလားရှစ်
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ ဧရာဝတီသံစဉ်
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ ထူးအိမ်သင် ၁
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ Burma DJ
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ ဦးသန့်လို ဖြစ်ချင်သူ
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ ရသနိုင်ငံရေး
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ ဇေယျာသော်
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ Rising Movie Star
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ ရဲတိုက်ဖောင်ဒေးရှင်း
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ ဂရမ်မီ သီချင်းများ
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ US က မြန်မာစစ်သား ၂
မိုဘီဂျီနို နဲ့ ပါရဂူဆေးသိပ္ပံကျောင်းသား